XOG: CC Shakuur oo ku gacan seeray Dalab Xasaasi ah oo uga Yimid Kheyre | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: CC Shakuur oo ku gacan seeray Dalab Xasaasi ah oo uga...
XOG: CC Shakuur oo ku gacan seeray Dalab Xasaasi ah oo uga Yimid Kheyre
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan maagaalada Nairobi ayaa diiday inuu la kulmo Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, kaas oo magaaladaas ka wada dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan hankiisa siyaasadeed ee 2020/21.
Xubno ka tirsan Wadajir, ayaa inoo sheegay in Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu diiday inuu ka Jawaabo casuumaad kaga timid Xasan Cali Kheyre oo ku aadan iney kulmaan, maadama mudadii xafiiska uu joogay Mr. Kheyre uu xadgudub ku sameeyay sharafta qiyamka siyaasiga oo ah Hoggaamiye mucaarad oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya.
Sida xogta aan ka helnay Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa doonaya inuu CC Shakuur ka raali geliyo wixii dhib ah uu ka tabanayo, waxaana arrintaas shuruudo adag ku xiray hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo dalbaday in marka fagaaro raali gelin buuxda ku bixiyo.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Xasan Cali Kheyre ka tabanaya iney xukuumaddii uu hoggaaminayay ka dambeyso weerarkii lagu qaaday guriga Xisbida Wadajir, halkaasina lagu baabi’iyay naf iyo maal taas oo ilaa iyo heer maxkamadeed gaartay.
Mr. Kheyre oo hadda ku sugan magaalada Nairobi ayaa halkaas ka wada dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo aad u xooggan, wuxuuna sanadkan u sharxan yahay xilka madaxweynaha dalka.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Puntland oo Muqdisho soo gaaray
Next articleKashifaad: Wax ka Ogow Amarrada ladul dhigey RW Rooble intii uu socdey kulankii Habar-Khadiija.